Mogadishu Journal » Pique ayaa ku qanciyay Barca inay u tartami doonto koobab maadaama Koeman uu taageero helayo
Pique ayaa ku qanciyay Barca inay u tartami doonto koobab maadaama Koeman uu taageero helayo
Gerard Pique ayaa weli ku qanacsan in Barcelona ay ka soo kaban karto bilowgii gaabiska ahaa ee ay ugu tartami lahayd koobab maadaama Ronald Koeman uu taageero ka helay kooxda dhexdeeda.
Ka dib barbarihii ugu horreeyay ee LaLiga ee ay la galeen Cadiz kulankoodii 27-aad, Barca ayaa guuleysatay kaliya labo guul shantii kulan ee ugu sarreysay ee ay ilaa hadda ciyaartay.
Dhanka kale, kooxda reer Catalan ayaa wax gool ah dhalin laba ka mid ah saddexdii kulan ee ugu dambeeyay tartamada oo dhan, in ka badan 41-kii hore, maadaama ay weli ku dhibtoonayaan maqnaanshaha Lionel Messi, oo u dhaqaaqay Paris Saint-Germain xilli ay jiraan dhibaatooyin dhaqaale .
In kasta oo furitaankii liidashada ee ololaha, Pique wuxuu ku baaqay midnimo kooxda si loo raadiyo xal u helidda arrimahooda gudaha iyo dibaddaba.
“Naadigu sanado badan ayuu ku jiray mowjadda mowjadda,” Pique ayaa u sheegay Movistar kaddib bar-baro 0-0 ah oo Khamiistii dhacay.
“Waxaan maraynaa xaalad aan looga baran, waa sanado qasan, oo leh isbedel madaxweyne, iyo beddelaad tababarayaal. Wadajir waa inaan ku dadaalnaa sidii aan ku heli lahayn nabad -gelyo maskaxeed.
“Qof walba wuxuu doonayaa inuu guuleysto, waxaa jira siyaabo badan oo wax looga qaban karo, dhammaanteen waan caban karnaa ama waan shaqeyn karnaa, ciyaartoydu waxay halkan u joogaan inay shaqeeyaan.
“Yaanan laba dhinac raadin, dhammaanteen waxaan la joognaa madaxweynaha iyo sidoo kale tababaraha, ma xakamayn karno buuqa [naadiga hareeraheeda ah] mana doonayo inaan ka fekero.”
Xaqiiqdii, barbaro goolal la’aan ah ayaa la micno ah in Barca ay dhalisay sideed gool oo kaliya ka dib shantii kulan ee ugu horreysay horyaalka, waana soo laabashadoodii ugu xumeyd heerkan tan iyo 2003-04 (shan).
Casaankii Frenkie de Jong ee xilli dambe ayaa sidoo kale ahaa kaarka cas ee labaad ee Barca xilli ciyaareedkan, waxaana weheliyay Eric Garcia kulankii Athletic Bilbao, inta ka badan ololihii hore oo dhan iyadoo kooxda Koeman ay sii wado edeb darro.
Si kastaba ha ahaatee, Pique ayaa ku adkeysanaya in Barca ay ku soo laaban doonto hogaanka kubadda cagta Spain.
“Ma xirto maaliyada Barcelona si aan ku dhameysto kaalinta labaad ama seddexaad,” ayuu sii daba dhigay. “Waxaan halkaan u imid inaan u tartamo koobab.
“Mararka qaar waa inaan wajahnaa daqiiqado sidan oo kale ah, waxaan dareemeynaa in taageerayaasha ay naga dambeeyaan, xaaladduna ay nagu adag tahay dhammaanteen.
“Gabi ahaanba waan ku qanacsanahay, in kasta oo bilowga ah, inaan tartami doono, kooxda waxay ku jirtaa niyad wanaagsan waxayna leedahay rabitaan”.
Arrimaha xiriirka Koeman ee madaxweynaha Joan Laporta ayaa si wanaagsan loo diiwaangeliyay, maadaama kii hore uu u muuqdo inuu ku wajahan yahay albaabka laga baxo haddii natiijooyinku aysan dhakhso u imaan.
Xoghayaha farsamada ee Barca Ramon Planes ayaa ugu yaraan diiday soo jeedin kasta oo ahayd in Koeman laga qaadi doono waajibaadkiisa ka hor kulanka Levante ee Axadda.
“Haa, waxay la joogi doontaa Koeman, oo taageero naga haysta,” ayay diyaaraduhu u jawaabeen Movistar kadib ciyaartii Cadiz. “Kubadda cagta ayaa sidan loo aasaasay, tababarayaashu waxay ku jiraan imtixaan joogto ah iyo koox weyn, xitaa intaa ka sii badan.
Khataraha Khaarijinta (Assassination) ee Ikraam Tahliil Faarax shaaca ka qaaday..!!
Wararkii Ugu Dambeeyay Qaraxii Ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay Muqdisho (Sawirro)